U hogaansanaanta Heshiiska Paris kama hor istaagi doonto dhacdada El Niño | Saadaasha Shabakadda
U hogaansanaanta Heshiiska Paris kama hor istaagi doonto dhacdada El Niño
Ujeeddada ugu weyn ee Heshiiska Paris waa in laga fogaado kordhinta celceliska heerkulka caalamiga ah 1,5 darajo oo ka sarreeya heerarka warshadaha ka hor. In kasta oo ujeeddadan lagu guuleysan karo laguna xasilin karo heerkaas, isbeddelka cimilada ayaa sababaya kororka soo noqnoqoshada iyo xoojinta kiisaska ba'an ee dhacdada El Niño oo sidan ku sii socon doonta muddo qarni ah.
Xitaa haddii ujeeddooyinka Heshiiska Paris la gaadhay, tani uma adeegi doonto xasilinta El Niño. Daraasaddan waxaa lagu qabtay xarumaha cilmi-baarista ee Australia iyo Shiinaha. Ma dooneysaa inaad wax badan ka ogaato saameynta El Niño?
Kordhinta dhacdooyinka El Niño
Kuleylka sii soconaya ee bariga bartamaha badda Baasifigga ee ay sababtay kululaynta adduunka iyo qiiqa gaaska lagu sii daayo, Waxay ka dhigayaan dhacdada El Niño inay kordhiso soo noqnoqoshada iyo xoogga. Markii hore, El Niño wuxuu lahaa wareegyo 7 sano ah, maaddaama ay tahay dhacdo saadaasha hawada ee dabiiciga ah, oo lagu beddelay dhacdada La Niña. Waxaa jira caddeyn muujineysa in dhacdada El Niño ay sidan u dhacday muddo dheer. Si kastaba ha noqotee, isbeddelka cimilada ayaa keenaya inay ku dhacdo si dhakhso leh oo xoog leh.
Dhacdooyinka El Niño ee aadka u soo noqnoqda oo aad u daran waxay u horseedaa cawaaqib xumo waddamadaas ka cabanaya, sida Peru Agaasimaha daraasaddan, Guojian Wang, ayaa sheegay in halista hadda jirta ee kiisaska daran ee El Niño ay tahay 5 qarnigiiba laakiin sanadka 2050, marka kululaynta la saadaalinayo inay gaadhay 1,5 darajo, soo noqnoqoshada waxay labanlaabmi doontaa 10 xaaladood.
Si loo ogaado saameynta iyo soo noqnoqoshada dhacdada El Niño ee mustaqbalka, shan nooc oo cimilo ah ayaa la isticmaalay kuwaas oo ku saleysan xaalad caalami ah oo qiiqa gaaska lagu sii daayo uu aad ugu yar yahay. Taasi waa, iyagu waa qiiqa caalamiga ah ee IPCC ku qiyaaseyso inay jiri doonaan haddii la buuxiyo shuruudaha Heshiiska Paris. Xaaladaha daran ee El Niño waxay dhacaan marka bartamaha roobka ee Badweynta Baasifigga waxay u dhaqaaqdaa Koonfurta Ameerika, taas oo keenta isbeddelo cimilada ah, kuwaas oo aad loogu sii nuuxnuuxsanayo hadba bariga ay xarunta u dhaqaaqdo.
Sidaa darteed, saameynta isbeddelka cimilada horeyba looma joojin karo. Waxa kaliya ee aan sameyn karno waa inaan ka qancino inta aan kari karno.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » U hogaansanaanta Heshiiska Paris kama hor istaagi doonto dhacdada El Niño
'' Haddii aad ka yar tahay 32 sano jir, weligaa weligaa kuma noolan bil iyada oo heer kulka adduunka uu ka hooseeyo celceliska ''
Baraf-barafka ku dhaca Arctic-ka ayaa sii deynaya methane!